धनराज गुरुङ भ्र’ष्टाचारीप्रति आ’क्रामक रूपमा प्रस्तुत,अख्तियारलाई प्रश्न ठुला नेतालाई जेल हालेको खोई ? - Sampurnab Khabar
धनराज गुरुङ भ्र’ष्टाचारीप्रति आ’क्रामक रूपमा प्रस्तुत,अख्तियारलाई प्रश्न ठुला नेतालाई जेल हालेको खोई ?
१ माघ २०७८, शनिबार by सम्पूर्णव
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ रुपन्देही पुगेर ठूला भ्र’ष्टा’चारीप्रति आ’क्रा’मक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। उनले साना साना भ्र’ष्टा’चार गर्नेलाई मु’द्दा चलाए पनि ठूला भ्र’ष्टा’चार का’ण्डको छानबिनसमेत नभएको उनले बताए।
कार्यक्रममा उनले भ’ष्ट्रा’चार छानबिन सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएको बताए। नेता गुरुङले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस ७० करोड, वाइड बडी, ओमनी, यति, ललिता निवास जग्गा प्रकरणलगायत भ्र’ष्टा’चार का’ण्डको छानबिन हुन नसकेको प्रति पनि दुः’ख व्यक्त गरे।
संसारमा ठूला नेता पनि जेल गएको इतिहास भएको भन्दै उनले नेपालको सन्दर्भमा छानबिन नहुनु दुःखद् भएको बताए। आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पनि भ्र’ष्टा’चार का’ण्डको छानबिन गर्न भनेको उनले जानकारी दिए।
भारतले नेपालको भूमिमाथि अ’ति’क्र’मण गर्दै आएको भन्दै भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर मात्र नहुने, वार्ता अगाडि बढाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए। उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिएर कूटनीतिक वार्ता बढाउनुपर्छ, सधैंका लागि समाधान खोज्नुपर्छ, हाम्रो भूमि हामीले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ।”
राष्ट्रियताका सन्दर्भमा पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्ने भन्दै उनले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कुनै पनि नेताले व्यक्तिगत विचार राख्न नहुने बताए। उनले भने, “राष्ट्रियता ख’त’रामा पर्दा नबोल्ने हो भने के का लागि राजनीतिक गरेका छौं ? देश र जनता तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताको सन्दर्भमा बोल्न सकेनौं भने राजनीति छोड्नुपर्छ,” उनले भने।
Prevअग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख मानेर जान नसक्ने अध्यक्ष ओलीको घोषणा
Nextसुनौलि नाकाबाट स्पेयर पार्टसको अवैध आयातले सरकारको राजस्वमा धक्का,स्थानिय व्यापारीहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था